आमा तिम्रो लागि घर बन्यो ! मन छुने भिडियोआज फेरी रुवाय धुर्मुसले सहयोगी मन हरुले हेर्न न छुटाईदिनु होला ! – पुरा पढ्नुहोस्……
आमा तिम्रो लागि घर बन्यो ! मन छुने भिडियोआज फेरी रुवाय धुर्मुसले सहयोगी मन हरुले हेर्न न छुटाईदिनु होला !
पिडालाई नजिकबाट नियाल्दा, आफ्नै मनमुटु प्रताडित हुन्छ । हरेकका दुखले हरपल आफैंलाई घोच्छ । पहाडी भेगलाई भुकम्पले थिलथिलो पार्दा पुननिर्माणमा जुटेका हामी तराई डुबेर हजारौं मानिस घरबार विहिन भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौं ।
राहत र उद्धारले मात्र मन शान्त भएन त्यसैले सहयोगी मनहरु एकत्रित गर्दै रौतहटको सन्तपुरमा बाढी प्रभावितका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने अठोट गरेउ। किनकी राम्रो कामको लागि सहयोगी मनहरुको साथ सधैं हुन्छ छ भन्ने पुर्ण विश्वास हाम्रा अघिल्ला बस्ती हरुबाट नै प्रष्ट भैसकेको थियो । सोही अनुरुप यो बस्तीको लागि पनि यती धेरै सहयोग प्राप्त भयो कि जुन बयान गरेर साधे नै छैन !!! सह्योगी मन लाई नमन गर्दछौं ।
हमिलाइ दैनिक सहयोग भै रहेकै छ, तथापि बस्ति निर्माणको लागि अझै १ करोड भन्दा बढी रकम अभाव नै छ ,रै पनी सहयोग मिल्नेछ छ भन्ने बिश्वास का साथ खुट्टा नकमाइ काम लाई अघि बढाइरहेका छौँ । आशा छ हाम्रो भावना लाई बुझिदिनु हुनेछ !!
तपाईं हरु ले सहयोग गरेको बस्ती १०० दिन मा एस्तो देखिन थालेको छ!!
हेर्नूहोस यो भिडियो।
Prevको हुन् यी युवती जसले रबि लामिछानेको निम्ति यस्तो गित गाइन, रबि लामिछानेको सम्मान स्वरूप एक शेयर गरौ(भिडियो)
Nextसिमा अतिक्रमण बारे भारत बिरुद्ध यस्तो खबर आयो त ! नेपाली जनताको लागि खुशीको खबर !
Live Now: विश्वकप क्रिकेटको छनोट खेल खेल्नका लागि जित्नैपर्ने दबाबमा क्यानाडासंग खेल्दै नेपाल, हेर्नुहोस लाइभ (मोबाइलबाट हेर्न सकिन्..
न्युज २४ टिभिकै नाममा पैसा उठाउदै ठगी धन्दा, रबिले यसरी लिए ठगको सात्तो (पूरा बिबरणसहित)